Waa kuma ra’iisalwasaaraha Itoobiya ee kuxigi doono Meles Zenawi?
Qoraaga maqaalkan waa shaqaale katirsan Wasaaradad Arimaha Dibadda ee Itoobiya.
Bismillaahi wassalaatu wassalaamu calaa rasuulilaahi
Waxaa jirtay walina jirto falsafo loo aaneeyo inay sabab utahay bururka siyaasadeed ee kuhabsatay Jammahuuriyadii Soomaaliya taasoo ay dad badan usaariyaan damaca ay qabiillada qaarkood rabeen amaba wali rabaan inay afduubtaan qaranka dadka oo dhan kawada dhaxeeyo, taasoo sida qaalibka ah burbur iyo barakac keento waliba ha’ugu darraadeen qolodii damaca qalloocnayde. Waxaan jeclaystay markaa inaan uyara sharxo dad badan oon aqoon ulahayn dabeecadda siyaasadeed ee Itoobiya inay aad ugu egtahay middaa Soomaaliya kajirto oo farqiga udhaxeeyo uu yahay oo qudha:
Itoobiya oo kawayn Soomaaliya dhul ahaan, sidoo kale kadad badan oo ku toban jibbaaranto.
Meeshaa Soomaali qabiil qabiil ay isu haysato waxaa Itoobiya la’isu colaadiyaa qowmiyad qowmiyad kala af iyo kala diinba noqon karo.
Marka siyaasadda Itoobiya hadba qowmiyad afduubato oo ay haddana fashilanto waxna ukala socon waayaan waxaa faraha lasoo galo dawlado shisheeye oo danaynayo jiritaanka Itoobiya iyadoo markaa dawladdaas taakulo ballaadhan ugaysato dalkaa iyadoo usii mari qowmiyaddaa markaa afduubato dalkaas ama qowmiyad cusub oo rabto inay iyada maamulka lawareegto.
Si’uu qofku udhuuxo dhagarta, fasahaadka, foolxumada iyo sida dhiigga la’isaga miirto dalka Itoobiya ha’akhriyo maqaalkan kusoo baxay dhawaan bogga http://www.oduu.com/ oo aan turjumay asagoo ingiriisi ah waxaadna kadaalacan kartaa hoos linkigiisa.
Maqaalkiina waa sidan;
(Waxaa qoray Galmo Haromaya) Wakhti aan dheerayn waraysi uu layeeshay Jonathan Dimlbey oo katirsan Teachers TV, Ra’iisalwasaaraha Itoobiya Meles Zenawi wuxuu ballan qaaday inuusan isasoo sharraxi doonin doorashada soo socoto. Meles wuxuu hore usammeeyey ballanqaadyo lamida kan uu hadda sammeeyey laakiin uusan waligii kadhabayn. Waxa markan hadalkiisa kadhigayo mid ay ubadan tahay inuu rummoobo ayaa ah inuu Meles haysto cadaadis sii kordhayo oo ay kuhayaan ururkiisa talada dalka haya ee (Tplf) Tigray Peoples Liberation Front oo rabo inuu iscasilo. Warbixin ka’imanayso gudaha ururkaas talada dalka haysto oo soo gaadhay Qoraha (waa qofka maqaalkan qoray) ayaa sheegayso inay dhowr xubnood oo katirsan Gudigga Fulinta ee ururkaas ay kulataliyeen Meles inuu xilka uu hayo kadago si dib loogusoo nooleeyo sumcadda ururkaas ee ah inuu dimuqraadi yahay.
Hadalkan uu dhawaan sheegay Meles ayaa markaa sababay inay dad badan falanqeeyaan qofka booskiisa buuxin doono. Waxay arrintan abuurtay dooddo kulul oo kadhax aloosanto taageerayaasha maamulka Meles. Bulshada Tigreega gaar ahaan ayaa iyadu ukala jabtay laba koox doodda cidda buuxini booska Meles awgeed. Qolyaha aadka uxagjira ee Tigreega ah ayaa ayagu kudhaggan in uu noqdo ra’iisalwasaaraha cusub nin Tigree ah oo katirsan Tplf ta, meesha qolyaha qunyarsocodka ah ay leeyihiin waa in Meles booskiisa uu buuxiyo nin aan Tigree ahayn si ay sumcadda maamulka dalka kor ugu kacdo mucaaradkana ay uwaayaan waxay ku eedeeyaan nidaamka ayagoo leh meesha Tigree unbaa xukuma oo qof kale waxba looma ogola.
Qolada hore oo ah kuwa xagjira waxay kudoodayaan sidan; cadaadiska badan ee madaxda Tigreega soo foodsaarayo iyo sidoo kale fakashada isdaba joogga ah ee ay sammaynayaan qawmiyadaha kale oo kafakanyo dawladda waxaa mustaxiil ah in lugu a’aamino kursigan cid aan Tigree ahayn. Waxay kabaqayaan kooxdan xitaa hadii ay jagadan udhiibaan qof ay aamineen oo kadhashay qowmiyad kale qofkaas oo xubin ka’ah urur waynaha Ethiopian Peoples Revulationery Democratic Front (EPRDF) oo ah urur ay dhiseen gacantana kuhayaan Tplf ta, Waxaa dhici karta markaa qofkan la’aaminay ee katirsan qowmiyadaha kale ee loo dhiibayo xukunka inuu kubiiro ururrada qowmiyaddiisa ee mucaaradka ku ah nidaamka. Waxayna kudoodayaan oo ay tusaale kadhiganayaan madax iyo saraakiil badan oo Oromo ahaa darajo sarena kahayey nidaamka aadna loo aminsanaa oo wada goostay una wada galay mucaaradka Tplf ta.
Meesha ay qoloda qunyarsocodka ah kudoodayaan haddaan qof udhashay qowmiyadaha kale jagada Ra’iisulwasaraha loo magacaabin waxaa sii kordhi xiisadda iyo tuhunka laga qabo qowmiyadda iyo maamulka Tigreega, iyadoo caalamka laga dhaadhicin doono inay Itoobiya tahay dal ay iska maamushaan Tigree kaligood say rabaanna kayelaan. Waxay leeyihiin waa lagamamaarmaan in jagada loo magacaabo qof aan udhalan Tigree iyadoo qofkaas uu gacanta ugu jiri nidaam ay gacanta kuhayso Tplf 100%. Waxay intaas kudarayaan inuu qaabkaas shaqayn doono maxaa yeelay bay leeyihiin Ra’iisalwasaarahaas lamagacaabay waxaa gees walba kafadhin doono Tigree, tusaale ahaan lataliyaashiisa iyo dadka nabadgalyadiisa masuulka ka ahba waxay noqoni Tigree. Meles na isagoo jagada kadagay ayuu wali wax walba faraha kulajiri sidoo kalena ahaani lataliye.
Waxaad mooddaa inay doodda kugacan sarreeyaan qolyaha qunyarsocodka ah oo rabo in lamagacaabo nin aan udhalan Tigree. Inkastoo ay qurba joogga Tigreega iyo madaxda sarsare ee Tplf ta ee Mekele iyo Addisababa joogto ay kabaqayaan in lamagacaabo qof aan tigree ahayn inuu Ra’iisalwasaare noqdo, haddana waxay kuqanacsan yihiin inayna suurtogal ahayn inay kaligood awoodda iskasii haystaan oo in jagada loo magacaabo qof kale mooyee si markaa loogu ekeysiiyo inay meesha kajirto isbedel iyo dimuqraadiyo dhaba.
Arrinta taas xigta ee laga doodayo ayaa ah qowmiyaddee lagasoo xulan qofka jagadan loo magacaabayo. Waxay ubadatay in uun laba qolo middood lagasoo xulan, labadaas oo kala ah; Axmaarada ama Oromada, maadaama ay tiro ahaanna dadka ugu badan yihiin sidoo kalena ay mucaaradka ayaga ugu xoog badan yihiin. Qoloda rabto in lagadhigo RW nin udhashay qowmiyadda Axmaarada waxay kudoodayaan laba qodob oy u arkaan inay kukala duwan yihiin xubnaha labada qoomiyadood ee kujiro urur waynaha EPRDF; madaxda ururka Amahara National Democratic Movement (ANDM) waxay aad daacad ugu ahaayeen maamulka Tplf ta marka loo eego ururka oromada, Oromo Peoples Democratic Organisation (OPDO). Waxaa kale oy kudoodayaan in marka la’isbarbardhigo fakashada laga fakado dawladda markii 1 xubin oo katirsan ANDM uu dawladdA kagoosto, ay dhinaca OPDO dawladda kagoosato 20 xubnood, taasoo muujinaysa farqiga udhaxeeya labadan qolo. Intaas waxaa sii dheer inay dadka goosto ee Oromada ah ay intooda badan yihiin dad aad loo aaminay darajooyin sarsarena hayey islamarkaana ay ugaleen jabhadda Oromo Liberation Front (OLF) oo kamida ururrada ugu daran ee ay TPLF ta dagaalka kula jirto. Oromo badan oo kasoo qaybqaadatay dajinta iyo xididaynta awoodda TPLF ta dhulka oromada ayaa maanta ama kagoostay dawladda ama noqday dad ladayriyey ama ay TPLF tu laysay kadib markay ushaqayn waayeen. Dadkaasna waxaa kamida Madaxwaynihii hore ee gobolka Oromada Xasan Cali, Madaxwaynihii hore ee Fedwraalka Itoobiya Negaso Gidada, Afhayeenkii baarlamaanka fedaraalka Almaza Meko, Madaxii nabadsugidda Yonathan Dibissa iyo kii hadda ugu danbeeyey janaraal darajo sare lahaa aadna u ammaannaa Sarreeye Gaas Kemal Gelchu kaasoo lagoostay boqolaal askari oo Oromo ah kuna biiray jabhadda OLF. Ganaraal Kemal Gelchu waxaa hadda loo magacaabay Madaxa Taliska Guud ee Ciidamada Oromada oo dhawaanahan xulufo lanoqday Ciidanka Ururka Ogaden National Liberation Army (ONLA) si ay ulawada daggaalammaan ciidanka bari ee Itoobiya. Sidaa awgeed bay yidhaahdeen qolyahan haddii Ra’iisalwasaare laga dhigo nin Oromo ah wuxuu sababi karaa khasaare ba’an oo kuyimmaado awoodda Tigreega ee Itoobiya. Waxaa markaa halis yar magacaabidda nin Axmaar ah maadaama aynan kubadnayn fakashada ururka ANDM sida ururka OPDO. Lix iyo tobankii sano ee ay Tigreegu Itoobiya xukumeen oo kaliya Tamirat Layine ayaa kajirey wax kamid ah madaxda ururka ANDM wax ay is khilaafeen madaxda Tigreega. Waliba iskudhaca Tigreega iyo Tamirat ma’ahayn wax siyaasad kusalaysan ee waxay ahayd iskudhac ay sababtay hanti la’iskuqabsaday hantidaasoo hore looga dhacay dadka Reer Itoobiya.
Qoloda Rabto in ra’iisalwasaaraha laga dhigo nin Oromo ah waxay leeyihiin sidan; mucaaradka ugu adag halisna kuhayo awoodda siyaasadeed ee Tigreega waa Oromada siiba kuwa taageersan ururka OLF. Sababta xoogaysay mucaaradka Oromada ayaa ah in lasoocay ayaga xag bulsho, xag dhaqaale iyo xag siyaasadba. Waxay leeyihiin maadaama ay Oromadu yihiin qowmiyadda ugu ballaadhan Itoobiya haddii lamagacaabo ra’iisalwasaare Oromo ah waxaa kadhaadhici caalamka inay Itoobiya kajirto dimoqraadiyo iyo awood qaybsi sax ah. Sidoo kale kacdoonka kajiro dhulka Oromada wuu is dhimo haddii lamagacaabo Ra’iisalwasaare ayaga ah, uruka OLFna waxaa yaraani taageerada uu heli maadaama ay meesha kabaxayso dooddoodii ahayd Oromada waxba looma ogola. Waxaa iyana suurtogal noqoni in ladhagro bulshada caalamka ayagoo moodi in dalkan xubnaha baarlamaankiisa ay saddex meelood oo meel ay Oromo yihiin sidoo kale Ra’iisalwasaaraha uu Oromo yahay, hadday imaato in layidhaahdo Oromada waa lacubudhiyaa oo lacadaadiyaa. Hadday dhacdo markaa in ladhibaateeyo Oromada waxaa loo arki inay Oromoda dhaxdeeda isdhibaataynayso sidaasna Tigree wuu ku eed la’aani. Qolodan marka waxay leeyihiin magacaabidda nin Oromo ah waa waddada kaliya ee lagu sharciyayn karo awoodda Tigreega ee itoobiya. Si marka loo yareeyo halista ka’iman karto Ra’iisalwasaaraha Oromada ah iyo inuu lasafto ururka OLF waa in jagooyinka kale ee muhiimka ah laga buuxiyo tigreega xagjira sida nabadsugidda, Milatariga iyo latalintaba si’ay gacan ugu hayaan Ra’iisalwasaaraha had iyo goor.
Inkastoo la’isla fahmay Tigree ahaan in lamgacaabo Ra’iisalwasaare aan Tigree ahayn haddana wali la’iskuma afgaran qowmiyadda lagala soo bixi Axmaaro ama Oromo waloow ay doodda ku gacan sarreeyaan qoloda Oromada u ololaynayso.
TPLF ta waxay abuurtay guddi soo xulo soona qiimeeyo cidda loo dhiibi jagadan waxaana madax looga dhigay Sibehat Nega oo asagu kamid ahaa aasaasayaashii ururka TPLF iyo profasor Medhine Tadesse oo kamida khubarada ugu magaca dheer Tigreega iyo profasor Kinfe Abraha oo ah madaxa machadka caalamiga ah ee nabadda iyo horumarinta oo ah machad ay Tigree gacanta kuhayaan, si’ay usoo wada baadhaan una keenaan qof aan Tigree ahayn oo dhaxlo booska Meles Zenawi. Baadhista waxay kusaabsan tahay soo ururinta warbixinno buuxo oo kasheekaynayo murashaxiinta, mabaadii’da ay aaminsanyihiin, cidda ay taageersanyihiin iyo waliba noloshooda bulsho iyo mid siyaasadeedba.
Ragga sharaxan ama laxiisaynayo
Madaxda sarsare ee ANDM iyo OPDO ayaa aad loogu kuurgalay waxaana tartamayaasha xisbiga ANDM kamida Tefera Walwa, Wasiirka Tayaynta iyo Addisu Legesse Ra’iisalwasaare kuxigeenka iyo Wasiirka Beeraha iyo Horumarinta Reer Miyiga. Labadan nin waxay lashaqaynayeen TPLF ta kudhawaad 20 sano. Labadoodaba waxay xubno ka’ahaayeen ururkii Ethiopian peoples Revolutionery Party (EPRP) laakiin waxay kagoosteen horaantii 1980 kii ayagoo ugalay ururka TPLF, kadibna waxay aasaaseen ururka Ethiopian peoples Democratic Movement oo markii danbana loo bixiyey ANDM si uu ubuuxiyo hadafka TPLF ta aya kalahaayeen urur waynaha EPRDF ee ah inay urur xubin kanoqdo kahelaan qowmiyad walba.
Tefera Walwa waa ninka ugu daacadsan Tigreega marka la’eego ragga aan udhalan Tigree, inkastoo ay colaad kadhaxayso kuwa Tigreega ah ee sii xagjira. Adissu Legesse , wuxuu kudhashay Hararge wuxuu kuhadlaa afka Oromada, waa nin hawlkar ah una dhashay Axmaaro aadna daacad ugu ah Meles Zenawi. Waa ninkii badbaadiyey Meles markuu shirqoolayey ninkii xag jirey ee Siye Abraha iyo kooxdiisii, wuxuuna wargaliyey Meles in la afganbin rabo. Niman kamida Tigreega xag jira ayaa u arka nin khaa’in ah balse waxaa aad utaageersan Meles. Labadan nin een soo xusnay waa Walwa iyo Addisu ee waxay aad ugu xidhan yihiin maamulka sare ee TPLF ta hanoqoto xag guur iyo xag ganacsiba.
Xagga xisbiga OPDO , Cabdulla Gemeda , Kuma Demeksa iyo Girma Birru ayaa ugu horreeya tartanka musharaxnimada. Cabdulla wuxuu hore u ahaa Wasiirkii Gaashaandhigga haddana waa Madaxwaynaha Gobolka Oromada, waana ninka ugu daacadsan oo Oromo ah madaxda ururka TPLF, laakiin asaga waa nin aqoon yar, sidoo kale sumcad xun iyo waliba Qawmiyadda Oromada oo kudoodayso inuusanba ninku Orormo ahayn ayaa hoos udhigtay inuu guddiga soo xulidda iyo soo qiimeyntu aad uxiiseeyso. Kuma Demeksa oo ahaan jirey Madaxwaynihii hore ee Gobolka Oromada haddana ah Wasiirka gaashaandhigga wuxuu leeyahay dhinacyo wanaagsan iyo kuwa xunba. Dhinacyada xunxun waxaa kamida inuu lasaftay nimankii Tigreega ahaa ee xag jirey ee damcay inay afganbiyaan Meles ee uu gadhwadeenka u ahaa Siye Abraha markii ay Tigeergu is khilaafsanaayeen, waxaana xilka looga qaaday amar uu bixiye Meles naf ahaantiisa. Dhinaciisa wanaagsan ayaa ah inuu iska gaabsaday dhacdadaa kadib oo uusan caban inuu Meles xilka kaqaaday, akhiiranna waxay arrintaa keentay inuu Meles usoo dabco kana dhigoWasiirka Gaashaandhigga sanad kahor. Meles ayaa si daacadnimo kujirto uga hadlay markii uu usharaxay baarlamaanka asagoo yidhi “Teshrom Yalakorefe” oo macnaheedu yahay ninkii aan dhibsan waxba xitaa markii lacasilay.
Girma Birru, oo ah Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha ayey dad badan kutilmaameen inuu yahay ninka ugu rajada fiican inuu soo baxo, maxaa yeelay wuxuu isku darsaday daacadnimo iyo karti, waa dhaqaalayahan aqoon sare leh waligiina kama hadlin dhibaatada lugu hayo oromada umana nixin marka loo eego madaxda sarsare ee katirsan xisbiga OPDO oo ayago kagubtay dhibka lugu hayo dadka Oromada ah. Waligiina kama uusan horimaan lawareegidda ay Tigreegu dalka lawareegeen xag siyaasad iyo xag dhaqaalaba. Sidaa awgeed Addisu Legesse iyo Girma Birru ayaad mooddaa inay kusoo baxeen tartanka labada urur ee ANDM iyo OPDO.
Warar la’iskuhallayn karo oo kasoo baxay gudaha Tigreega ayaa xaqiijiyey inay guddigu sharaxeen Girma Birru inuu noqdo ra’iisalwasaaraha Itoobiya marku Meles Zenawi xilka kadago, waxaa sidoo kale loo badinayaa inuu Meles aqbalay arrintaa. Inkastoo uu Girma Birru wakhti danbe kusoo biiray ururka OPDO haddana wuxuu si daacadnimo ah ugu adeegay Meles Zenawi. Girma waa dhaqaalayahan kudheereeya maamulka kanasoo shaqeeyey maamulkii hore Migistu oo uu wasiir ka’ahaa. Gudiga xulashadu waxay leeyihiin sababta ay u doorbideen Girma Birru ayaa ah inuusan kujirin ama xidhiidh lalahayn urur Oromo ah oo mucaarad ah sidoo kalena uu kamadhan yahay wax dareen wadaninimo sida lugu arko qaar badan oo kamida madaxda ururka OPDO.
Girma Birru iyo madaxa UNIDO, Vienna, Austria
Taariikhda dheer ee uu kuyeeshay maamulkii hore iyo kan Tigreegaba waxay muujinaysaa bay dheheen inuu ninku yahay danayste dantiisa un culayska saaro oon siyaasad iyo arrimo kale aynanba kujirin hammigiisa.
Haddayna xaggiisa isbadal ka’iman isbadalkaaso oo saammeeya fikradda guddiga xulashada waxaan arki doonna asaga waa Girma e oo aad loogasoo daynayo Tv ga, Raadiyaha sidoo kale asagoo safarro badan dibadda ku’aadayo taasoo muujinaso in loo diyaarinayo jagada.
Tallaabadan ay qaadeen Golaha Fulinta ee TPLF ta iyo Meles oo ah inay Ra’iisalwasaare kadhigaan nin Oromo ah waxaan shaki kujirin inay abuuri doodo dhaxmarta dadka lasocdo siyaasadda Itoobiya iyo gobolkaba. Waxaana kudoodi inay tallaabadan muhiim utahay TPLF ta sidoo kale ay noqoni tab ay madaxda sarsare ee urukaas ay wax kuleexinayaan. Waa qirid ay qirayaan in ay mucaaradada ugu ba’an ay uga imanayso xagga dadka Oromada ah. Midda kale mucaaradadii cimriga gaabatay ee ay Axmaaradu wadeen xilligii doorashadii 2005 ta marka labarbardhigo Oromadu waxay kuhayaan Tigreega mucaarado marba marka kadanbayso sii xoogaysanayso oo xag diblumaasiyadeed, xag siyaasadeed iyo xag millatariba ah. Tusaale ahaan xisbiyada sharciga ah ee Orormada sida Oromo National Congress (ONC) iyo Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) waxay si nabadgalyo kudheehan tahay u faydeen bannaankana usoo dhigeen silica iyo saxariirta lugu hayo Oromada, meesha ay OLF sii xoojisay cadaadiska millatari iyo kuwa diblumaasi ee ay kuhayso Tigreega.
Tallaabooyinkii ugu danbeeyey ee ay guulaha kakeentay OLF ta taasoo ahayd inay dhaxgasho ciidamada Itoobiya saraakiil iyo ciidanba waxay curyaamisay awoodii TPLF ta ee kutiirsanaanta Oromada inay u ahaadaan cudud millatari ooy kudagaal galaan. Sidoo kale talaabadii ay OLF tu kaga mid noqotay uruka Alliance for Freedom and Democracy (AFD) oo ay kula midowday mucaaradka kale ee Itoobiya ayaa markii ugu horryasay kor usoo qaaday sumcadda ururka iyo inay aaminaan dadka aan Oromada ahayn ee Itoobiya, waxayna sababtay arrintaa inay TPLF waydo awooddeedii iyo farsamadii ay kukala qaybin jirtay kuna xukumi jirtay dadyowga kale ee Itoobiya. Sidaa awgeed madaxda TPLF ta waxay aaminsan yihiin inay hadday Ra’iisalwasaare Oromo ah magacaabaan ay dib ulasoo noqon doonaan wixii kahallaabay.
Wadaniyiinta Oromada ayaga haddii lamagacaabo Girma Birru ama nin kale oo Oromo ah waxay leeyihiin innaba hayaraatee wax saamayn ah kuyeelan mayso dadka Orormada ah. Waxay intaas kudarayaan halganka dadka Oromada kuma saabsano inuu Madaxwaynaha Itoobiya ama Ra’iisalwasaaraha Oromo noqdo. Halganka dadka Oromada wuxuu kusaabsan yahay kala daadinta nidaamka kudhisan cadaadiska, cubudhinta iyo kafaa’iidaysiga dadka laga xoogga badan yahay ee jira maanta iyo in la’abuuro xaalad u ogolaanayso dadka Oromada ah inay ayagoon cid kale saamaynin go’aansadaan mustaqbalkooda siduu noqon.
Aqoonyahan caana oo Oromo ah oo katirsan Jaamacadda Addisababa ayaa wuxuu yidhi tani noqon mayso markii ugu horraysay ee qof Oromo ah madax looga dhigo Itoobiya. Teferi Bent wuxuu ahaa madaxwaynaha Itoobiya 1974-77, laakiin wax isbadal ah kuma iman nolosha dadka Oromada ah xilligiisii, dalka wuxuu gacanta ugu jirey Axmaarada, kadibna waxaaba dhacday in asagii ladilo kadib markuu dhibsaday dilkii loo gaystay aqoonyahannadii Oromada iyo hogaamiyayaashii kaleba sida; Tadase Birru iyo Xayle Fida. Waxaa iyana jirtay inuu Dr. Negasso Gidada ahaa madaxwaynaha Itoobiya muddo intii TPLF ta talada haysay uuna naftiisa sheegay inuusan waxba uqaban Oromada, waxa uuba sii cimri dheereeyey xukunkii TPLF ta. Aqoonyahankan Oromada ah ee katirsan Jaamacadda Addisababa wuxuu leeyahay magacaabidda Girma Birru waxba kabadli mayso xaaladda Oromada inta uu nidaamka TPLT ta awoodda haysato.
Su’aasha ah inay tallaabadan hoos udhigi awoodda uruka OLF oo ay kor uqaadi sumcadda iyo sheegashada dimuqraadiyada ee TPLF ta, wuxuu leeyahay madax katirsan ururrada mucaaradka ee Oromada; inta bulshada Oromada ah qaybaheeda kala duwan la cadaadinayo, ladhibayo, laxidhxidhayo sidoo kalena lagummaadayo suurtogal noqonmayso in mucaaradku yaraado inuu joogsado iskaba daayee.
Waxaa jiro su’aalo culculus oon laga jawaabin. Ma kudhaqaaqi doonan madaxda Tigreega go’aan kama danbays ah oo ay umagacaabaan masuul Oromo ah jagadan sare?
Talaabadan halista ah ee laga yaabo inay qaataan Tigreega malaga yaabaa inay kacaawiso TPLT ta sharciyaynta xukunkooda sida ayaga ay ku riyoonayaan?
Girma Birru hadduu jagadan qabto wali daacad ma’usii ahaan doonaa TPLF ta mise wuxuu qaadan doonaa go’aan taariikhi ah oo wuxuu kubiiri doonaa sidii saaxiibadiisii ay kuwada jireen ururka OPDO sida Almaza Meko, Yassin Xuseen, Xasan Cali iyo Sarreeye guud Kemal Gelchu oo markaas uu dhiibo kursiga awoodda?
Kuwani waa su’alaha la’iswaydiinayo waxaana uun kajawaabi karo wakhtiga oo qudha.
*Qoraaga maqaalkan waa shaqaale katirsan Wasaaradad Arimaha Dibadda ee Itoobiya.
*Maqaalkii oo igiriisi ah http://www.oduu.com/news/index.php?news_id=1397
Warbixin: Borlänge iyo Somalitalk.com II
Gunnimo doon : Askari gumaysi tababaray, Askari shuuci soo tababaray, Akhri
Argagixii loo ooyayey oo irridaha kasoo galay: Siyaasiyiin argagax baadigoobayo si ay hanti uga.. Akhri...